ပင်မစာမျက်နှာ အာရှဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; ''အယ်လ် Turco'' ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။ နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှသာမရှိရင် Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အစောပိုင်းနှစ်များ
Arda Turan တူရကီမစ္စတာ Adnan Turan (ခမညျးတျော) နှင့် Yuksel Turan (မိခင်) အား, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 30 ဇန်နဝါရီလ 1987 မှာမွေးဖွား။ သူကမျှပရိုဖိုင်းကိုသူဖြစ်လာဖို့ဒါမှမဟုတ်ဘာသည်သူ၏အသက်တာ၌လာမယ့်လာလိမ့်မယ်ဘာမသိရှိခြင်းကြီးပြင်းလာတယ်။
Arda ရဲ့ပညာရေးစံချိန်များလွန်းစံပြကနေဝေးခဲ့သည်။ မိမိအအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ခုနှစ်တွင်သူသည်ကျောင်းအတွက်ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်မကြာခဏကျောင်းကျောင်းအုပ်မှလာရောက်လည်ပတ်သူမှားအဆုံးတွင်တွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ကိုကျောင်းကိုသွားခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်လုပ်ဤစည်းကမ်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်မှာဘောလုံးသူစဉ်းစားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဘောလုံးကွင်းသို့သွားကြဖို့ Arda ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူ့မိဘကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကလျင်မြန်စွာအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဒေသခံတစ်ဦးဘောလုံးအကယ်ဒမီမှသူ့ကိုမှတ်ပုံတင်ဖြင့်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်။
သူကြီးပြင်းအဖြစ်သူတို့ဟာ Arda ပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းနှင့်ထိရောက်သောခဲ့ကြသည်။ အချိန်နှင့်အတူ Arda ဘောလုံးရည်ညွှန်းထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်သူ၏အသက်တာအတွက်တသမတ်တည်းနျြရစျ။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးမိမိအခွက်တဆယ်ကဲ့သို့, မိမိမိဘများကိုပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုပျော်ရွှင်စေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုစျေးဝယ်ဘို့သူ့ကိုထဲကယူဖို့ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကသူ့ကိုသူလိုခငျြဘာမှမဝယ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကသူ့အိပ်မက်ဆီးတားနိုင်ဘာမှထံမှသူ့ကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့, သူတို့သူ့ကိုအိပ်ကိုစားခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ဂိမ်းကစားကြည့်ပါ။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
ခမညျးတျော: မစ္စတာ Adnan Turan အစ္စတန်ဘူလ်၏Bayrampaşaခရိုင်၌သူ၏ဒေသခံအရောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အလွန်အဆင်ပြေသောသူတစ်ဦးငြိမ်းချမ်းသောသူဖြစ်၏။
သူကအမြဲသူသည်မိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းရှိသူ၏သားပေးသောထောက်ခံအခန်းကဏ္ဍများအတွက်အောကျမေ့နေသည်။ သူ၏ဇနီး Yuksel မတူဘဲ, မိမိသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုများတွင်အများကြီးရောနှောမထားဘူး။
မိခင်: Yuksel Arda ရဲ့မိခင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်အငြင်းပွားစရာများအလယ်၌သူမ၏သားကိုကာကွယ်ဘို့အကောင်းဆုံးလူသိများသူကအရမ်း outspoken ဖြစ်တယ်။
သူမသည်သူမ၏သား Arda သူချင်း Turk သတင်းစာဆရာ Bilal Meşeတိုက်ခိုက်ခဲ့ရှိရာအမျိုးသားရေးအသင်းလေယာဉ်အဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်းသူမ၏သားကိုကာကွယ်ရန်အမြန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Yüksel Turansaid အဆိုအရ, "ငါ့သားအဘို့အဦး Lynch မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး '' စတင်ခဲ့သည်။
Arda Turan ရဲ့မိခင်Yüksel Turan ကလည်း, "Arda အလွန်ကောင်းသောလူတစ်ဦးသည်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်သူ့ကိုမှကိုချိုးဖျက်ဖို့မလိုချင်ပါဘူးသူတစ်ဦးမျှဘောလုံးသမားဤတိုင်းပြည်များတွင်ရနိုင်သူမကယခုစျေးနှုန်းပေးဆောင်သောအောင်မြင်မှုရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါသည် ... သူတို့ဟာတစ်ဦးစုပေါင်း Lynch ကမ်ပိန်းနဲ့ငါ့သားအပြီးသတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် ! ငါကသူတို့ကိုမတုံ့ပြန်ဖြစ်ရန်ခက်ခဲကြောင်းငါ၏သားတွေအကြောင်းဒါအခြေအမြစ်မရှိကျမ်းစာ၌ရေးထားပြီ။ " စွပ်စွဲအသုံးအနှုန်းတွေဖို့ရာအရပျပေးခြင်း။
အစ်ကို: Okan Turan Arda ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူ။
Okan 1989 အတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်ဂျင်နီယာ, စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန, အစ္စတန်ဘူလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကနေ 1992 အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်နည်းပညာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်, လေကြောင်းနှင့်အာကာသယာဉ်မှူးအင်ဂျင်နီယာဌာနထံမှကသူ့ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့ (B.Sc) ကိုလက်ခံရရှိနဲ့ Master ဘွဲ့ (MSc) ။ Okan 1992 အတွက်ဒေတာများကို Securities မှ Co. , မှာ Financial Analyst များအဖြစ်မြို့တော်စျေးကွက်၏လယ်ပြင်၌သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Financial Analyst အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
Miranda Shelia နှင့် Arda Turan ဒီဇင်ဘာ 2016 ကတည်းကချိန်းတွေ့ပါပြီ။ ဂျြောဂြီယနျမော်ဒယ်အရေးအသား၏အချိန်ကအဖြစ်မကြာသေးမီကရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်။
Aslian Dogan (အောက်တွင်တွေ့ရှိခဲ့) Arda Turan ဟောင်းရည်းစားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် 4, အ 1985th ဒီဇင်ဘာလမှာမွေးဖွားနှင့်အင်္ဂလိပ်နှင့်တူရကီနှစ်ဦးစလုံးပြောတတ်သည်။ Aslian နှင့် Arda 2014 စတင်ခဲ့နှင့်ဒီဇင်ဘာလ 2016 အတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးပုံမှန်အတိုင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားရန်အလွန်နီးစပ်ခဲ့သညျ။
ဘေးဖယ် Aslian, Arda Turan နှစ်ပေါင်းများစွာ5သည်အခြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ Arda Turan ဆက်ဆံရေးဟာဘဝ6အမည်များပါဝင်သည်။ (1) Dilara Oztunç (2007 ထံမှရက်စွဲ - 2008), (2) Sinem Kobal (2012 ထံမှရက်စွဲ - 2013) (3) Selin Imer (2012 အတွက်ရက်စွဲ) (4) Idil Firat (2013 အတွက်ရက်စွဲ) (5) Aslihan Dogan (2014) Miranda Shelia (6) (2017 အတွက်ရက်စွဲ) ။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -သူတစ်ဦးပေါ့ပ်စတားရဲ့အထင်
အဆိုပါလာလီဂါရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလချိုးစဉ်အတွင်း Turan တဲ့ pop ကြယ်ပွင့်အဖြစ်ကကြိုးစားလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူက '' The Voice "အပေါ်မနာသီချင်းဆိုရန်တူရကီမှအိမ်သို့သွားလေ၏။ သူက '' Sari Cizmeli Mehmet aga '' ဟုခေါ်သည့်သီချင်းဖျော်ဖြေ - တစ်ဦးဂန္တူရကီရော့ခ်သီချင်းနှင့်ကောင်းစွာရဲ့ဖွင့်သူကဘောလုံးကပ်သင့်တယ်ဆိုပါစို့။ တရားသူကြီးနေဆဲယူဆရအထူးဧည့်သည်သူကိုမြင်ရုံန်းကျင်ကသူတို့ကုလားထိုင်လှည့်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်နှင့်ရော်ဂျာဖက်ဒရေးရှင်း Idolizing
အဆိုပါမုတ်ဆိတ်မွေးကွင်းလယ်လူအထူးသဖြင့်တူရကီနိုင်ငံအများအပြားကအိုင်ကွန်အဖြစ်ရှုမြင်သည်။ သို့သော် Arda Turan သည်အခြားအားကစားပိုင် icon များရှိပါတယ်။ တင်းနစ်ဒဏ္ဍာရီရော်ဂျာဖက်ဒရေးရှင်းနှင့်ဘတ်စကက်ဘောအိုင်ကွန်မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်သူမှတက်ကြည့်အားကစားသမားဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးအင်တာဗျူးမှာတော့သူကဖော်ပြထားခဲ့သည်, "ငါသည်အစဉ်အမြဲတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားကြသည်, အကောင်းဆုံးအားကစားသမားများနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကအမြဲတမ်းပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြသည်။ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်နှင့်ဖက်ဒရယ်ငါ၏အ icon များဖြစ်ကြသည်ဒါကြောင့်ဖြစ်၏။ "
ထိုအဒဏ္ဍာရီလယ်ပြင်ပေါ်တွင်သူတို့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်များအတွက်သာလူသိများဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားနှင့်သူတို့၏လူ့သဘောသဘာဝနေကြသည်နှစ်ဦးစလုံး။ Turan ၏အသင်းဖော်မကြာခဏသူ့ကိုသူယုံကြည်သောအရာတို့ကိုအကြောင်းကိုစိတ်ခံစားမှုသူသည်အဖြစ်နှလုံး-မျိုးနှင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖော်ပြထားပါပြီ။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ကားခစျြ
တူရကီသတင်းဌာနအဆိုအရ Turan ယခင်ကတစ်ဦး Aston Martin DB9 နှင့် Mercedes-Benz SLS AMG ကပိုင်ဆိုင်သည်။
သူကကားများများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပြီးလက်ရှိတွင်တစ်ဦးမောင်း Audi RS6။ ဇန်နဝါရီလ 2009 မှာတော့သူအတွက်ကားတစ်စီးပျက်ကျမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည် အစ္စတန်ဘူလ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Turan အဘယ်သူမျှမလေးနက်သောဒဏ်ရာများနှင့်သာဖြတ်တောက်မှုနှင့်အမည်းနှင့်အတူဆက်လက်လေ့ကျင့်ရေးခံစားခဲ့ရသည်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ဒဏ်ရာပြဿနာများ
16 နိုဝင်ဘာလ 2008 တွင်, Turan အစ္စတန်ဘူလ် BB ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပွဲစဉ်ကာလအတွင်းပြိုကျ။
ဆေးရုံအမြန်ပို့ခံရပြီးနောက်သူနှလုံးပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အတူသိလိုက်ရတယ်။ အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်နေ့, ဆရာဝန်တွေ Turan ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခဲ့ကြောင်းအစွန်းရောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်ပုံမမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ 2009 မှာတော့သူဟာက်တုပ်ကွေး၏အသေးစားရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းခံစားခဲ့ရပေမယ့်လေ့ကျင့်ရေးပြန်စမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရပြန်လေ၏။
တောင်မှမကြာသေးမီကသည် Turk ဒဏ်ရာနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၎င်း၏ဒူးဒါမှမဟုတ်တံကောက်ကြောဒဏ်ရာဖြစ်စေ။ တကယ်တော့သည်, မိမိလက်ရှိအလုပ်ရှင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဂိမ်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူဒဏ်ရာရဘဲလျက်, မိမိမကျြမှောကျ၌မျက်ရည်နှင့်တကွလယ်ပြင်ထားခဲ့တယ်။
မိမိအရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာများနေသော်လည်းသူတစ်ဦးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်လူသိများသည်။ မကြာခဏသေဆုံးသဘောထားကိုပြောပါဘယ်တော့မှနှင့်အတူကစားသမားများ၏ ilk အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ တို့ကလာရန်မလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမယ့်ဘောလုံးသမားများအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကြောင်းကိုတစ်ဦးကရို။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-Leonidas နှင့်အတူအကြံအစည် Stricking
လူကြိုက်များသောမင်းသားအကြားအဆိုပါ Uncanny အကြံအစည်, 300 ၏ Gerard Butler AKA Leonidas နှင့် Arda Turan တခါမုန်တိုင်းအပေါ်အင်တာနက် set သိရသည်။ အဘယ်အရာကိုလူတိုင်း trilled တယ် Leonidas ၏ချမ်းသာစွာနေတွဲထားတဲ့လယ်ကွင်းပြိုကျ၏ Arda ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာ၏ရရှိမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -လီဗာပူးလ်အသင်းအဘို့ကစားအိပ်မက်မက်
ကစားသမားများမကြာခဏအထူးသဖြင့်ကလပ်အဘို့မိမိတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ voice မှလူသိများကြသည်။ တချို့ကအခြို့သောမကျင့်စဉ်သူတို့၏ချစ်ရသူနှစ်ဖက်အဘို့ကစား၏ကောင်းသောကံကြမ္မာရှိသည်။
Arda Turan အဆုံးစွန်သောအမျိုးအစားကပိုင်ဆိုင်သည်။ နောက်ကျောယူရို 2008 မှာကစားသမား Andrey Arshavin FC အသင်းဘာစီလိုနာအဘို့သူ့မေတ္တာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အပြောင်းအရွေ့အကောင်အထည်ဘူး။ 2011, Turan ခုနှစ်တွင်, ထို့နောက်ဂါလာတာအဘို့ကစားလည်းအင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီကြီးလီဗာပူးလ်တို့အတွက်သူ့မေတ္တာထုတ်ဖော်ပြောဆို။ သူက "အစဉ်မပြတ်ငါဖော်ပြထားခြင်းအမျှလီဗာပူးလ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစဉ်အလာများအကြှနျုပျကိုဆွဲဆောင်။
"ဥရောပမှာတော့ကျွန်မလီဗာပူးလ်ထောက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းကိုဒါကြောင့်ကျနော်ဥရောပမှာကစားရန်သွားလျှင်, ငါသည်သူတို့အဘို့ကစားချင်ပါတယ်။ "
သူကမာဆေးဆိုက်၏လီဗာပူးကစားရန်သူ၏အိပ်မက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ သို့သော်လီဗာပူးလ်တောင်းဆို လာ. , ဘယ်တော့မှမ။ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်လုပ်ခဲ့တယ်နှင့်လာလီဂါခေါင်းစဉ်နဲ့အခုသူစခန်း Nou မှအပေါ်ပြောင်းရွေ့ထားပြီးချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှသူတို့ကိုလုယူသောပဲ့မှာဒီယေဂိုရှိမောင်နဲ့သူ့ရဲ့ exploits အောက်ပါ။ အဘယ်အရာကိုလီဗာပူးလ်ရဲ့အရှုံးပါပြီဟန်ဧကန်အမှန်ဘာစီလိုနာရဲ့အမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပြီးတာနဲ့ဒိုင်လူကြီးမှာ Boot တက်ပစ်ချ
ယင်းအစေးအပေါ်သူ၏ပညတ်ဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ကောငျးတဲ့ဥပမာဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း Turan အထူးသဘာစီလိုနာနောက်ဆုံးရာသီမှအက်သလက်တီကိုရဲ့ Copa del Rey ရှုံးနိမ့်အတွက် linesman မှာမိမိ Boot တက်ပစ် ချ. မကြာသေးမီကာလ၌ကြီးမားတဲ့လမ်း၌သူ၏ဒေါသကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ရွှေနှလုံးသားနှင့်အတူတစ်ဦးက Man
Arda ရွှေနှလုံးရှိသည်ဖို့လူသိများသည်။ သူကမကြာသေးခင်ကအာရပ်ကမ္ဘာအတွက်မိဘမဲ့ဂေဟာများအတွက်ရန်ပုံငွေမှအဲဂုတ္တုပြည်၌ပရဟိတပွဲစဉ်များတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူသည် Soma သတ္တုတွင်းသားကောင်များ၏မိသားစုများအတွက်ရန်ပုံငွေမှသူ့ယခင်နေအိမ် (Izmir Ataturk အားကစားကွင်း) မှာတစ်ဦးမေတ္တာဂိမ်းကစားခဲ့ပါတယ်။
သူကအထူးသဖြင့်နေမကောင်းကလေးများထွက်ကူညီမှုအတွက်လူသိများသည်။ မေလ, 2014 ခုနှစ်တွင်သူသည်ချစ်ကြည်ရေး atleast 161 တိုင်းရင်းသား Azerbaijani အဘိဓါန်အရပ်သားများ၏သတ်ဖြတ်မှုပြောပြတယ်သော Khojalay အသတ်ခံရမှုအဘို့အသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ မိမိအလှုပ်ရှားမှုများအသိအမြင်မြှင်နှင့်ကမ္ဘာကြီးငြိမ်းချမ်းရေးမြှင့်တင်ပါဝင်သည်။
သူလည်းတစ်မိသားစုရှိ၏။ သူ၏ပထမဦးဆုံးလစာနှင့်အတူသူသည်မိမိအမိဘများအဘို့အိမ်တော်ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကမိမိညီကို, မမယ့်မည်သည့်ကားကိုတစ်ဦး Porsche တစ်ကားကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တစ်ဦးကဆိုရှယ်လစ်
Arda Turan မြို့ကိုတကြိမ်နိုင်ငံရေး spectrum ကိုဖြတ်ပြီးလူတွေကိုမက်ဒရစ်အတွက်မိမိအိမျဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါနေရာငြင်းခုံမှုများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ မိမိကိုမိမိ Turan ဆိုရှယ်လစ်သည်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလစည်းစိမ်ဥစ္စာများနှင့်အလုပ်အကိုင်၏တူညီသောထုံးစံ၌အိမ်ထောင်စုအတွက်လူတိုင်းဆက်ဆံဖို့လူသိများသည်။
သူကအစ္စတန်ဘူလ်ကအလုပ်သမားလူတန်းစားဧရိယာထဲမှာကြီးပြင်းနှင့်လမ်းများပေါ်တွင်မိမိအအစောပိုင်းနှစ်နေခဲ့ရသည်။ သူ့ရဲ့ကလေးဘဝနှင့်ပြုပြင်လူတန်းစားအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများကိုစဉ်အတွင်းခက်ခဲတဲ့ကြိမ်သူ၏အသက်တာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။ အင်တာဗျူးမှာတော့သူကဖော်ပြထားခဲ့သည်, "ငါသည်အစဉ်အမြဲ, သာမန်လူမျိုး၏အခွင့်အရေးကိုအလုပျသမား '' အခွင့်အရေးကိုထောက်ခံပြီ။ "
ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကနိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်အစဉ်အဆက်မှတဆင့် Turan နေဖြင့်အမွေဆက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ဖခင်အယူဝါဒမြှောင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်, သူ့အဘိုးကို right-တောင်ပံနိုင်ငံရေးကိုတစ်ထောက်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘောလုံးအလုပ်ရှာဖွေရေး
Turan Bayrampaşaအတွက်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုစတင်။ သူသာ 12 ခဲ့သည့်အခါသူကထွက်ရပ်နေရာ 2000 အတွက်ဂါလာတာဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူဟာကစားသမားရဲ့လူငယ်ရာထူးအတွက်ကစားငါးရာသီအပြီး 2006 အတွက်ဂါလာတာနဲ့သူ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ ဒါဟာအမြဲဒီ rosy မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါ ပတျသကျ. အလှနျသေးနုလူငယ်အနည်းဆုံးနေ့စဉ်ဘောလုံးကွင်းများ၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုဂိမ်းများအတွက်လိုအပ်သောမြန်နှုန်းနှင့်ခွန်အားကိုမရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှရုန်းကန်။ Arda အဆိုပါ 1987 မွေးဖွားတစ်နှစ်အသက်အရွယ်အုပ်စုအတိုဆုံးကစားသမားကြီးနှင့်သူ၏အစောပိုင်းဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ပြသခဲ့သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်ပိုကြီးပိုအတွေ့အကြုံရှိကစားသမားများအပေါငျးတို့သလှည့်ကွက်ခဲ့သူတစ်ဦးကစားသမားဆီသို့ဦးတည် unaccommodating ခဲ့ကြသည်ပေမယ့်ထိရောက်မှုမရှိခဲ့ပေ။
သူကသြဂုတ်လ 2006 အတွက်တူရကီနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်သူ၏ပွဲဦးထွက်စေတော်မူ၏။ Turan တူရကီ 1-0 အနိုင်ရမယ့်ဖော်ရွေပွဲစဉ်အတွက်လူဇင်ဘတ်ဆန့်ကျင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အတူရကီများအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ 2006 / 07 ရာသီမှာတော့ Turan ဂါလာတာရဲ့မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ 2008 ၌သူ၏ပထမဦးဆုံးစူပါလိဂ်ခေါင်းစဉ်ပြောဆိုထားသည်။ စပိန်ကလပ်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်သြဂုတ်လ 12 အတွက် 2011 ယူရိုသန်းဘို့သူ့ကိုထ scooped ။ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာသူ၏ပထမဦးဆုံးရာသီမှာတော့ Turan သည့်ယူရိုပါလိဂ်နှင့်ယူအီးအက်ဖ်အေစူပါဖလားအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအက်သလက်တီကိုရဲ့နံပါတ်တစ် 10 အဆိုပါ 2013 / 14 ရာသီအတွက်သူ့အဖွဲ့ရဲ့လိဂ်ခေါင်းစဉ်အောင်ပွဲအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့ရာသီ, အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ် 40 နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီ။ တူရကီကြယ် Turan 22 ဂိုးသွင်းနှင့် 32 အတွက် 177 ကိုကူညီပေးနေအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာမိမိလေးနှစ်စာလုံးပေါင်းအတွက်ကိုက်ညီရှိခဲ့ပါတယ်။ 34 ယူရိုသန်း၏တစ်ဦးလွှဲပြောင်းအခကြေးငွေနှင့်အတူဘာစီလိုနာရဲ့အသစ်လက်မှတ်ရေးထိုးသမိုင်းအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးတူရကီကစားသမားဖြစ်လာသည်။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တစ်သတင်းထောက်မွန်းကျပ်
အဆိုပါတူရကီအမျိုးသားရေးအသင်းထံမှ Arda Turan အငြိမ်းစားသတင်းများအရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပျံသန်းအပေါ်တစ်ဦးသတင်းစာဆရာမွန်းကျပ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
သူကဆုကြေးငွေပိုက်ဆံကျော်ကစားသမားအကြားစိတ်တိုးပွားဖန်တီး Turan အပြစ်တင်ထားတဲ့အမှုကိုပြုခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံကျော်မက်ဆီဒိုးနီးယားဆန့်ကျင်နေတဲ့ဖော်ရွေအောက်ပါလေယာဉ်ပေါ်မှသတင်းစာဆရာနဲ့နှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖူးမှစွပ်စွဲခဲ့သည်။
အဆိုအရ ရိုက်တာသတင်းဌာန, Turan "အမှားအောင်" ကိုဝန်ခံနှင့်သူ၏အမျိုးသားရေးအသင်းကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသားအသင်းယူနီဖောင်းဝတ်ထားစဉ် "ငါအမှားလုပ်လေ၏။ ဒါဟာ "အမျိုးသားအဖွဲ့ကလေယာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်မသင့်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုခဲ့သည် သူကပြောပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်သတင်းစာအဆိုအရ အဆိုပါလွတ်လပ်သောတူရကီသည်တူရကီထုတ်ဝေမှု၏ Bilal Meşeထံချဉ်းကပ်လာသည့်အခါထိုအဖြစ်အပျက်သည်အီတလီသို့အဖွဲ့၏လေယာဉ်ပေါ်၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည် Milliyet။ ဤတွင်အဆိုပါလွတ်လပ်သောဖလှယ်ခဲ့ကြအစီရင်ခံနေသည်ကားအဘယ်သို့:
"Bilal Meşe, အဲဒီမှာသင်ပေါင်းငါ့ကိုပြောပြပါ?" သူကစတင်ခဲ့သည်။ သင်ဆုကြေးငွေကိစ္စကိုအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်သည့်အခါ "သင်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသလော ကျွန်မထံမှငွေကိုအဘယ်သူမမေးခဲ့တာလဲ အဘယ်သူသည်ထံမှဆုကြေးငွေအဘို့ငါမမေးခဲ့သလဲ Talk ကို။ လာစမ်းပါ။ အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုသူတို့အားအစီရင်ခံစာများကိုရေးလုပ်? "Turan သတင်းများအရMeşe, ကစားသမားဝမ်းအများကြီးအဘို့အမှူး Turan အပြစ်တင်ခဲ့သောဝါရင့်သတင်းစာဆရာမှာကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။
ထိုအ Turan ရဲ့ rant အစီရင်ခံစာသူလည်ချောင်းများကMeşeဆှဲအဖြစ်အသင်းဖော်များကအဆီးအတားခံရဖို့ရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုရှေ့မှာကျော်သွားကြပြီဟုမိန့်ပေးခဲ့သည်။ Arda Turan သူမဆိုနောင်တခံစားရသူတော့ဘူးတူရကီများအတွက်ကစားမညျမဟုတျကွောငျးကိုပါဘူးဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာအောက်ကပုံထဲမှာမြင်ကြအဖြစ်သူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးတစ်ချိန်ကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာရန်ထိုက်၏။
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -LifeBogger အတ္ထုပ္ပတ္တိအဆင့်
သူကအများအားဖြင့်မိမိအဘောလုံးကိုထိန်းချုပ်, dribbling ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရူပါရုံကိုလူသိများသည်။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်သည်သူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိအဆင့်တွေ့ရမယ်။
ပြုပြင်ထားသောနေ့စွဲ: မေလ 13, 2020
Ryo Miyaichi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - 9ပြီ ၂၄ ရက်၊